Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Saint Kitts sy Nevis Breaking News » Fitsangatsanganana tsy misy visa avy any Palestine mankany St Kitts sy Nevis izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Vaovao farany momba ny Palestine • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Saint Kitts sy Nevis Breaking News • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Fitsangatsanganana Visa tsy misy visa avy any Palestine mankany St Kitts sy Nevis izao.
Palestina no firenena fahefatra nametraka fifandraisana ara-diplomatika tamin'i St Kitts sy Nevis taorian'ny Burkina Faso, Gabon ary Ejipta tao anatin'ny efatra herinandro.
St Kitts sy Nevis fizahan-tany dia nandrakitra ny fifanarahana diplaomatika fahefatra tao anatin'ny efa-bolana latsaka.
Ny famoahana tsy misy Visa dia mamela ny fivezivezena tsy misy fetra amin'ny olom-pirenen'ireo firenena nanao sonia ny fifanarahana.
Ity tombontsoa ity dia mivelatra ihany koa amin'ireo olona nahazo zom-pirenena tamin'ny alàlan'ny fomba ara-toekarena.
Ny praiminisitr'i Nevis sy ny minisitry ny raharaham-bahiny any St Kitts sy Nevis, Hon. Mark Brantley dia nanamafy ny fifandraisana iraisam-pirenena nandritra ny volana lasa.
Nandritra ny fahatsiarovana ny faha-60 taonan'ny Hetsika Tsy Milahatra any Serbia tamin'ity herinandro ity, ny minisitra Brantley dia nanao sonia fifanarahana famotsoran-tany tsy misy visa miaraka amin'i Palestine.
Palestina no firenena fahefatra nanangana fifandraisana ara-diplomatika St Kitts sy Nevis taorian'ny Burkina Faso, Gabon, ary Egypt tao anatin'ny efa-bolana lasa izay.
“Andro manan-tantara ho an'i St Kitts sy Nevis rehefa manao sonia [ny] fifanarahana famoahana visa mifandimby izahay miaraka amin'ny minisitry ny raharaham-bahiny HE Riad Maliki [amin'ny] Fanjakan'i Palestine mamela ny fivezivezena maimaimpoana eo amin'ny firenentsika roa. St Kitts sy Nevis dia manohy manitatra ny dian-diplomatika manerantany, "hoy ny nosoratan'ny minisitra Brantley tao amin'ny Instagram.
Ny famoahana tsy misy Visa dia mamela ny fivezivezena tsy misy fetra amin'ny olom-pirenen'ireo firenena nanao sonia ny fifanarahana. Midika izany fa tsy ilaina ny visa fidirana ho an'ny teratany avy amin'ny firenena roa alohan'ny hidirany amin'ny firenena nanaovan-tsonia ny fifanarahana. Ity tombontsoa ity dia mivelatra ihany koa amin'ireo olona nahazo zom-pirenena tamin'ny alàlan'ny fomba ara-toekarena, toa St Kitts sy NevisFandaharana 'Citizenship by Investment (CBI).
The State of Palestine, ny fanampim-baovao farany amin'ny lisitr'ireo sorona fitaterana visa tsy misy visa afa-tsy St Kitts sy Nevis izay mamela ny olom-pireneny hiditra akaikin'ny toerana 35. Na izany aza, miaraka amin'ireo Palestiniana an-tapitrisany miaina an-tsambo noho ny tsy fandriam-pahalemana politika, maro no miatrika fahasahiranana mandeha amin'ny sehatra iraisam-pirenena na hiverina any amin'ny tanindrazany mihitsy aza.
Amin'ny alàlan'ity fifanarahana “manan-tantara” ity, ny diaspora Palestiniana sy ireo mpandraharaha izay nisafidy ny handray anjara amin'ny St Kitts sy ny programa Nevis 'CBI dia afaka mivezivezy maimaimpoana visa tsy any Palestine ihany fa amin'ny firenena sy faritany 160 eo ho eo, ao anatin'izany ireo ivon-toeram-pianarana sy ivon-toeram-pandraharahana.